Mazuva ano, nekuvandudzwa kwetekinoroji uye nemararamiro ehupenyu, vanhu vanowedzera kutarisisa hutano hwavo. Saka pane shamwari dzakawanda kubva kumabhizimusi akasiyana munda, vane tarisiro huru nezveye indasitiri yemishonga uye vanoda kuisa mari yemishonga fekitori, netariro yekugadzira ...
Mr. Prime Minister weTanzania Vakashanya IVEN Pharmatech IV Solution Turnkey Project
Nhasi, tinofara zvikuru kuti Va Prime Minister weTanzania vashanyira chirongwa che IV solution turnkey chakaiswa neIVEN Pharmatech muDar es Salam. Mr. Prime Minister vakaunza zvido zvavo zvakanaka kune timu yeIVEN uye mutengi wedu nefekitori yavo. Zvichakadaro, akarumbidza zvikuru Iven's qua yepamusoro ...
Kupindirwa kweIVEN Zvigadzirwa - Ropa Unganidzo Tube
Ampoule - Kubva Kumatanho kusvika Kumhando Yakasarudzika Sarudzo Iyo yekutsiva yeropa yekuunganidza chubhu imhando yekuraswa isina kunaka kumanikidza vharuvhu girazi chubhu iyo inogona kuona kuwanda kweropa kuunganidzwa uye zvinodiwa ...
Ko Zvakadii Neisina PVC Nyoro Bhegi Mapakeji Ye IV Solution?
Ampoule - Kubva Kumatanho eakagadzika Emhando dzeSarudzo Zvisiri-PVC rakapfava bhegi IV mhinduro yekugadzira mutsetse inotsiva mabhodhoro egirazi, mabhodhoro epurasitiki uye PVC firimu infusions hombe, ichivandudza zvakanyanya hunhu ...
Ampoule - Kubva Kumiswa kusvika kuCustomized Quality Sarudzo
Ampoule - Kubva Kumatanho kusvika kuCustomized Hunhu Sarudzo Ampoules ndiwo anoshandiswa zvakanyanya kupakurwa mhinduro pasi rese. Idzo idzo hombodo dzakavharidzirwa dzinoshandiswa kuchengetedza masampula mune ese emvura uye akasimba ...
Yedu eropa rekuunganidza chubhu yekugadzira mitsara inotengesa zvakanaka pasirese
Kazhinji, kupera kwegore kunogara kuri kubatikana nguva, uye makambani ese ari kumhanyisa kutumira cargos gore risati rapera kuti ape zvinobudirira kupera kwegore 2019. Kambani yedu haisi yakasarudzika, mumazuva ano gadziriro yekuendesa iri zvakare izere. Pakupera ...
Ndeapi akanangwa maficha eChina mishonga yezvigadzirwa zvemishonga panguva ino?
Mumakore achangopfuura, nekukurumidza kukurumidza kweiyo indasitiri yemishonga, iyo indasitiri yezvigadzirwa zvemishonga yakaunzawo mukana wakanaka wekuvandudza. Boka remakambani anotungamira ekugadzira mishonga ari kurima zvakadzama musika wepamba, nepo f ...
Ampoule Muchina À Coudre Led, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Yakagadzirirwa-Syringe Machine, Pre Yakazadza Syringe Kuzadza Machine, Ampoule Machine À Coudre Singer, Disposable Syringe & Tsono Production Line,